ठोरी र माडीका जनप्रतिनिधि भन्छन्– अयोध्याबारे बोलेकोमा प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद ! – Enepali News
July 16, 2020 199
१ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अयोध्या र भगवान् श्रीरामको जन्मस्थानका बारेमा दिएको अभिव्यक्तिपछि उनको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले अयोध्याबारे प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति ‘राजनीतिक विषयसँग जोडिएको छैन र कसैको भावनामा चोट पुर्‍याउने आशय थिएन’ भनरे स्पष्टीकरण दिएको छ । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको धार्मिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा नयाँ तरंग ल्याइदिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार भगवान् राम भारतीय नभएको र असली अयोध्या वीरगञ्जदेखि पश्चिमको गाउँ ठोरीमा पर्ने दाबी गरेका थिए । अयोध्या नेपालमै पर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले दाबी गरेपछि सो क्षेत्रसँग जोडिएका जनप्रतिनिधिहरु उत्साही भएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति तथ्यकै आधारमा आएको भन्दै ठोरी र माडीका जनप्रतिनिधिहरूले भगवान रामको जन्म यहीँ भएको भन्ने तर्क गरे।
‘विसं. २०३४ सालअघि ठोरी चितवन जिल्लामै अवस्थित थियो । जुनबेला ठोरी र माडीलाई पर्यायवाचीकै रूपमा लिने गरिन्थ्यो । सरकारी कामकाज पनि माडीबाटै हुने गथ्र्यो,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले ठोरीमा रहेको सीता गुफालगायत राम–सीतासँग जोडिएका थुपै्र धार्मिक स्थलहरू ठोरी–माडीकै आसपासको क्षेत्रमा छन् । सोमेश्वर पहाडको किनारामा सीता गुफा अवस्थित छ । सोही पहाडको पश्चिमतर्फ माडीमा अयोध्या अर्थात् अयोध्यापुरी समेत छ । वाल्मीकि आश्रम पनि माडीमा अवस्थित छ । यी सबै धार्मिक क्षेत्र सोमेश्वर पहाडकै आसपासका क्षेत्रमा छन् । त्यसैले यसैलाई प्रमाणमा रूपमा लिन सकिन्छ । जुन कुरालाई भोलिका दिनमा खोज अनुसन्धानले पुष्टि गर्छ । त्यसैले यसको इतिहासविद् र अनुसन्धानकर्ताले काम अघिबढाउनु पर्छ ।’
Prevसाउनको महिमा र विज्ञान: कस्तो पहिरन, कस्तो खानपान ?
Nextसन्तोष पन्त पनि मान्दैनन् राजेश हमाललाई महानायक, भन्छन्, ‘मेरालागि दीपकराज महानायक’ (भिडियो हेर्नुहोस)
आज थपिए ४ सय २१ कोरोना संक्रमित
स्यार्पुतालमा डुबेकाको उद्धार गर्दा २० र २३ वर्षका दुई युवाले ज्यान गुमाए
भारतीय चर्चित अभिनेता गोविन्दाको कार दुर्घटनाग्रस्त (भिडियो हेर्नुस्)
कोरोनाका कारण विदेशमा बसेका सबै नेपालीलाइ नेपाल फिर्ता पठाउन सकिने सम्भावना (2717)
सरिता गिरीविरुद्ध रमेश पर्साइले मुद्दा हाल्दै, साथ दिनेले सेयर गराै (1817)
ट्रम्प भन्छन् अब कोरोना निको पार्ने औसधि बनिसक्यो (1771)
श्रीमानले पि’टेर भागेपछी लक डाउनमा आमा छोरीको यस्तो बिचल्ली, मनै रुवाउने भिडियो हेर्नुस (1735)
सिन्धुली खुर्कोटकी इन्सपेक्टर शान्ता वाइबाको लोभलाग्दो काम ! सयौ मजदुरको उद्दार (1645)